Ukuqala kukaToluna: Ubukrelekrele boBathengi beXesha leXesha loLuntu oluHlabathi | Martech Zone
I-Toluna Start is a agile, end-to-end, real-time platform intelligence intelligence. Iimveliso zibonelela ngombono wabathengi, uphando lweemarike, kunye nokuxhobisa abathengi ukuba baqhube ngokukhawuleza ubungakanani kunye nomgangatho wophando ngexesha lokwenyani. Ngokungafaniyo namaqonga ophando emarike, iToluna idibanisa zombini itekhnoloji efunekayo kunye nokufikelela kuluntu lwehlabathi ukubonelela ngolwazi oludingayo.
Nokuba kukhula imveliso entsha okanye uvavanyo kunye nophawu lomyalezo kunye nemiyalezo yonxibelelwano, iToluna ineqonga lobukrelekrele labathengi ekuncedeni kuphando lwakho lwentengiso lwabathengi:
Ubukrelekrele babathengi -Fikelela kumthombo omnye wabo bonke ulwazi lwabathengi bakho. I-Toluna Start liqonga lobukrelekrele bokuthenga kunye nokungena ngemvume okukodwa. Fikelela kuluhlu olubanzi lwezisombululo zokuqonda ezizenzekelayo ezibandakanya uyilo lophononongo, abaphenduli bophando oluhlanganisiweyo, kunye nedeshibhodi zokunika ingxelo kubandakanya ukuqonda kunye neengcebiso.
Uhlalutyo kunye neeDashbhodi -Fikelela kwidatha yakho kwangoko. Ukusuka kwiingxelo zentsimi yexesha-lokwenyani kunye neempendulo zegama nezwi kuhlalutyo oluphambili. Linganisa ukusebenza ngokuchasene nee-KPIs kwimizuzu eneedashbodi eziyilelwe ukubonelela ngokuqonda okunokwenzeka. Idatha yobunzima, yenza abantu abangaphantsi, ucofe kwaye wenze onke amanqanaba ovavanyo lokubaluleka. Tsala kwaye ulahle i-PowerPoint isilayidi, igama lamagama ezenzi, ukwakha iitafile, kunye nokuqhuba kwakhona ii-banner njengoko kufuneka.
Uluntu kunye neengxoxo eziBukhoma -Khawuleza uzibandakanye nabantu ababaluleke kakhulu kuhlobo lwakho. Gumba nzulu kwaye utyhile iimvakalelo kunye nenkuthazo eqhuba isimilo sabathengi. Phuhlisa uluntu lweshishini olubonakalisiweyo olupheleleyo kwaye lubandakanyeka kakhulu- nokuba yeyiphi na imakethi ekujoliswe kuyo. Cwangcisa iNgxoxo ebukhoma enophawu kwimizuzu nje embalwa kwaye ubandakanyeke nabantu ekujoliswe kubo.
Ukuqonda kokuziphatha -Qonda indlela yokuziphatha kwabathengi kwiselfowuni kunye nedesktop, iiwebhusayithi, kunye neeapps. Kubandakanya usetyenziso olufakelweyo, iipateni zokuhamba, indlela yokukhangela, indlela yokuziphatha, kunye nolwazi lokuthenga kubathengisi abakhulu behlabathi.
Isampuli ezenzekelayo -Ukufikelela kubaphenduli ngexesha lokwenyani. Ixabiso, ukuvavanya ukwenzeka kunye nokwazisa iiprojekthi ngemizuzu. Isisombululo sesampulu esizenzekelayo sikaToluna sinika abaphandi umgca ngokuthe ngqo kuluntu lwethu olunefuthe labaphenduliweyo, abaphendulayo.
IPaneli yoLuntu yeHlabathi -Cofa kumandla abantu abangaphezulu kwezigidi ezingama-30 kwihlabathi liphela. Amalungu ethu alungile, azimisele, kwaye anakho ukubonelela ngempendulo oyifunayo, konke ngexesha lokwenyani ukugcwalisa izigqibo zakho. Ukujolisa abathengi kwiimarike ezingama-70 + zisebenzisa ngaphezulu kwe-200 yabantu kunye neeprofayili zokuziphatha.
Iinkonzo zoPhando -Iingcali zasekhaya zikaToluna zidityaniswe nenkampani yabo yodade Harris Uyasebenzisana ubuchule obunzulu nkqo obunokwenza okungaziwayo, kwaziwe. Ubungcali babo budityaniswe nezisombululo zethu ezizisebenzelayo. Okanye banokuyila inkqubo yesiko kunye neengcali zophando. Nokuba yeyiphi na inkonzo ehlangabezana neemfuno zakho.
Cwangcisa iDemo yokuQalisa iTemo
tags: isampulu ezenzekelayoisimilo sabathengiUkuqonda kwabathengiiingxoxo ezibukhomauphando lwemakethiiinkonzo zophandotoluna